Davida (mpanjaka) - Wikipedia
Teraka: 1040 tal. J.K.
Maty: 970 tal. J.K.
I Davida dia mpanjakan' i Israely teraka tokony ho tamin' ny taona 1040 tal. J.K. ary maty tamin' ny taona 970 tal. J.K. tao Jerosalema. Araka ny Testamenta Taloha ao amin' ny Baiboly dia mpanjaka faharoan' i Israely nandimby an' i Saoly (na Saola) i Davida teo anelanelan' ny taona 1000 sy 970 tal. J.K. Taranany ireo mpanjakan' i Jodà nifandimby. I Davida no mpanjaka nahatanteraka ny firaisan' ny Israelita rehetra sady nanao an' i Jerosalema ho renivohitry ny fanjakany. Amin' ny Kristiana dia tandindon' ny Mesia izy. Ao amin' ireo Bokin' i Samoela sy ireo Bokin' ny Mpanjaka ary ny Boky voalohan' ny Tantara no tena ahitana ny tantarany ao amin' ny Baiboly.
1 Tantaran' i Davida araka ny Baiboly
1.2 Ny fiainany manokana
1.3 Ny fahazazany sy ny fahatanorany
1.4 Ny fandreseny an' i Gôliata sy fanenjehan' i Saoly azy
1.5 Ny fiakaran' i Davida teo amin' ny fitondrana
1.6 Ny fahotan' i Davida sy ny vokatr' izany
2 Tantaran' i Davida araka ny silamo
Tantaran' i Davida araka ny BaibolyHanova
Atao hoe דָּוִד / Dawid i Davida amin' ny teny hebreo, izay midika hoe "tiana indrindra", "malala".
I Jese no rainy. Ny vadiny dia i Batseba (na Betsabe) sy i Abigaila sy i Egla sy i Maka sy i Ahinôama sy i Hagita ary i Abitala. Ny zanany dia i Sôlômôna sy i Absalôma sy i Kileaba sy i Tamara sy i Natana sy i Adônia sy i Amnôna sy i Jibara ary i Jerimôta.
Ny fahazazany sy ny fahatanoranyHanova
Teraka tao Betlehema i Davida. Izy no faralahin' i Jese mpiompy ondry tao amin' ny fokon' i Jodà. Niandry ny andian' ondrin-drainy i Davida nandritra ny fahatanorany. Nibaiko ny mpaminany Samoela Andriamanitra mba handeha mangingina any amin' i Jese hisafidy izay handimby an' i Saoly mpanjakan' i Israely amin' ireo zanany sivy lahy. I Davida faralahy no nosafidin' i Samoela ka nohosorany menaka, araka ny Boky voalohan' i Samoela (1Sam. 16.1-13). Mpitendry zavamaneno mahay i Davida ka noraisin' i Saoly tao an-dapany mba hankafizany ny fanenenon' ny valihany.
Nobatain' i Davida ny lohan'i Gôliata, sary nataon' i Josephine Pollard, taona 1899.
Ny fandreseny an' i Gôliata sy fanenjehan' i Saoly azyHanova
Taty aoriana, nandritra ny fotoana nampifandimbiasany ny findrasana ondry sy ny nitendreny valiha tao an-dapa dia nitsidika ny tobin' ny miaramila israelita izy mba hanome hanina ireo rahalahiny. Tany no nahalalany fa misy lehilahy amin' ny fahavalon' ny Israelita, dia ilay mpiady mahery indrindra tamin' ny tafiky ny Filistina, atao hoe Gôliata avy any Gata, izay nanao fihaikana ny Israelita hanao adin' olon-droa alohan' ny tena hiadian' ny tafika roa tonta. Nanolo-tena hamaly izany fihaikana izany amim-pahasahiana i Davida. Rehefa natao ny adin' i Davida sy i Gôliata teo amin' ny lohasaha Elaha, dia voan' ny vato natorak' i Davida tamin' ny antsamotady i Gôliata ka maty dia notapahin' i Davida ny loha (1Sam. 17.40-54). Raiki-tahotra ny Filistina ka nandositra. Tamin' izany no nahatonga an' i Davida ho mpinamana tamin' i Jônatana zanak' i Saoly.
I Davida mpandresy, nataon'i Matteo Rosselli, 1620
Niteraka fatahorana sy fialonan' i Saoly izany lazan' i Davida izany, satria nihevitra i Saoly fa tsy hahatanteraka ny fandovan' ny zanany lahy ny fanjakana izany. Nikendry ny hahafaty an' i Davida i Saoly ka nomeny azy ho vadiny ny zanany vavy atao hoe Mikala nefa tsy maintsy hiady amin' ny Filistina zato i Davida alohan' ny hanatanterahana ny fanambadiana (1Sam. 18.20-27). Resin' i Davida, izay lasa vinanton' i Saoly noho izany, ny Filistina, nefa nitohy ny fifofoan' i Saoly ny ain' i Davida. Nandositra tany an-tany efitra sahala amin' ny olon-dratsy i Davida ka nikambana tamin' ny jiolahy izay nanampy azy. Rehefa nitady azy i Saoly ka nahita azy sady saika hahafaty azy, dia nakany amin' ny Filistina fahavalony taloha, ka nanompo ny mpanjakan' ny Filistina tao Gata, atao hoe Akisy, i Davida.
Ny fiakaran' i Davida teo amin' ny fitondranaHanova
Rehefa maty i Saoly sy i Jônatana, tamin' ny ady nifanaovany tamin' ny Filistina, dia niverina tao amin' ny tanin' i Israely i Davida ka nasandratra ho mpanjakan' ny fokon' i Jodà tao Hebrôna (2Sam. 2.1-4), nefa tsy nanitatra ny fanjakany tamin' ny fokon' i Israely hafa izy. Fito taona taty aoriana dia nanaiky an' i Davida ho mpanjakany ny fokon' i Israely sisa rehetra, talohan' izany dia notapahin' i Isbaala (na Isbôseta) zanak' i Saoly izy ireo (2Sam. 5.1-5).
Niady matetika i Davida ka nandresy ny Filistina, ny Môabita, ny Arameana, ny Edômita ary ny Amônita, dia lasa lehibe ny tany notapahiny tao amin' ny Fanjakan' i Israely fony mbola tsy nivaky, ka izany no tanim-panjakana lehibe indrindra teo amin' ny tantaran' i Israely. Mba hampiraisany tanteraka ilay fanjakana vaovao dia nalainy ny mandan' ny Jebosita (na Jeboseana) tao Ziôna (na Siôna) ka nataony renivohitra ny tanàna jebosita atao hoe Jerosalema, izay lasa fantatra amin' ny anarana hoe "tanànan' i Davida" (2Sam. 5.6-9). Nitoky tamin' Andriamanitra i Davida ka nanaraka an-tsakany sy an-davany ny tenin' ny mpaminany, indrindra ny an' ny mpaminany Natàna izay nandrara azy tsy hanangana ny tempoly hametrahana ny Fiaran' ny Fanekena. Nanambara ny mpaminany fa tsy mendrika ny olona mpiady ny hanao izany asa izany sady ny zanak' i Davida no hanatanteraka ny fananganana ny tempoly (2Sam. 7.1-7). Noho izany dia tao anaty tabernakely ao Jerosalema no nametrahana ny Fiaran' ny Fanekena, ka nahatonga an'io tanàna io ho foiben' ny fivavahana sy renivohi-panjakan' ny tany nakamban' i Davida. Tao Jerosalema no tena nanaovana fihirana salamo amin' ny fotoam-pivavanana ka nahatonga an' i Davida ataon' ny lovantsofina fa mpamorona ny salamo miisa 73 ao amin' ny Bokin' ny Salamo ao amin' ny Baiboly.
Ny fahotan' i Davida sy ny vokatr' izanyHanova
Ny mpanjaka Davida mitazana an' i Batseba mandro
Nanao fahadisona lehibe i Davida rehefa nahatratra ny tampon' ny voninahiny, dia ny nanaovany fijangajangana niampy vonoana olona. Raiki-pitia tamin' i Batseba (na Betsabe), izay vadin' ny miaramilany atao hoe Oria izay lehilahy Hitita (na Heteana), mantsy ny mpanjaka Davida. Nitoe-jaza ilay vehivavy dia nalefan' i Davida tany an' ady eny alohan' ny miaramila rehetra i Oria ka maty (2Sam. 11.2-27). Mba ho setrin' ny fahotany dia maty ilay zaza vokatry ny fijangajangana tamin' i Batseba. Fanampin' izany koa dia nanakorontana ny filaminana tao an-dapa ny zanaka lahin' i Davida, ohatra amin' izany i Absalôma zanany izay tsy nikomy taminy nefa tsy nahomby ka niafara tamin' ny fahafatesana, sy i Adônia (na Adôniasa) izay nikononkonona fikomiana tao an-dapa mba haka ny fitondrana. Tsy nahomby i Adônia ka i Sôlômôna (na Salômôna) zanaka lahin' i Davida faharoa tamin' i Batseba no nataon' i Davida mpandova ny fanjakany, araka ny Boky voalohan' ny Mpanjaka (1Mpanj. 1.11-40).
Tantaran' i Davida araka ny silamoHanova
Ny lovan-tsofina islamika dia nanao an'i Dâwûd ho mpaminany-mpanjaka lehibe sy mpitsara feno fahendrena, manatanteraka ny sitrapon'i Allah. Tahaka ny amin'ny tantara hafa, ny Kor'anydia tsy mitazona afa-tsy singa manan-danja vitsivitsy amin'ny tantara ara-baiboly, toy ny ady amin'i Gôliata, miaraka amin'ny tanjona toriteny. Ireo mpaneho hevitra silamo toa an'i Tabari kosa dia nampiasa ny tantara ara-Baiboly izay fantany mba hamenoana ny tantaran'ny Kor'any.
Ny fitantarana ny fahadisoan’i Davida dia iray amin’ireo fizarana resahina aan-kolaka ao amin’ny Sorata 38. Ireo mpivaofy teny, mifandray amin’io andalan-teny io, dia nahatonga ny fitiavan’i Davida an’i Batseba, vadin’i Oria. Ho an'ny Dye, ity lahatsoratra ity dia mahita fitoviana ao amin'ny 2 Sam 12: 1-6 saingy ny mpanoratra dia mamaritra ny fahasamihafana. Azo atao ny fampitahana maromaro hafa amin’ny asa soratra ara-baiboly (Salamo 148;9-10 ho an’ny andininy faha-18-19) na amin’ny olona hafa. Ho an'i Gobillot, ny tantaran'ny Kor'any dia mampiseho ny fahalalana ny Torah sy ny Filazantsara nataon'ny mpanoratra an'ity andalan-tsoratra ity izay manambatra tantara roa. Na dia izany aza, ny fitantaran’ireo mpivaofy teny dia manao ny fakam-panahin’i Davida ho fizahan-toetra sitrak’Andriamanitra, ho fanoratana indray mamela ny fitehirizana ny dôgma ny amin’ny tsy fahaizan' ny mpaminany manota.
Ny fitantarana ao amin'ny Kor'any dia ny fampiasana ny teny silamo, "dhikr" na "fampahatsiahivana" ireo singa efa voarakitra ao amin'ireo asa soratra ara-pivavahana isan-karazany. Ho an'ny Kor'any, tahaka ny nandraisan'i Mosesy ny Torah sy ny fandraisan'i Jesosy ny Evanjely, i Davida dia nandray ny fanambarana ny soratra masina iray, dia ny Zabur, izay mifandray amin'ny bokin'ny Salamo. Na izany aza, ho an'ny mpandinika dia boky mampandroso kokoa fa tsy Lalàna vaovao. Ny Kor'any dia manantitrantitra ny fanomezam-pahasoavany amin’ny fihirana sy ny mozika, ka manome azy ny anjara asany amin’ny fandaminana ny litorjia kosmika: nanazava izy fa nandevozin’Andriamanitra taminy ny vorona sy ny tendrombohitra mba hahafahan’izy ireo mitory ny fiderana azy ho an’Andriamanitra. Hazavain’ny mpaneho hevitra fa ny hakanton’ny feony, rehefa nihira ny salamo izy, dia nampijanona ny voro-manidina mba hamaly azy, na ny biby dia voasinton' ny hiran’ny mpanjaka ka mety ho faty mosary na hetaheta.
Ilay mpahay tantara persianina Ibn Jarīr Tabari dia miresaka ao amin'ny tantarany momba ny fifaninanana fanontaniana folo mba hahitana hoe iza amin'ireo mpandova no mahazo ny zo hipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ho mpandimby an'i Davida Mpanjaka; izany hoe: “Inona no kely indrindra? Inona no lehibe indrindra? Ny mangidy indrindra? Ny mamy indrindra? Ny mahamenatra indrindra? Ny tsara indrindra ? Ny akaiky indrindra ? lavitra indrindra ? Inona no mahatonga ny alahelo lehibe? Ary ny mahafinaritra indrindra? ». Ilay alemà tatsinanana Gustave Weil dia mitatitra ao amin'ny angano silamo fa i Solomona dia teraka nanana fahendrena sy fahalalana lehibe.
Araka ny voalazan’ny Kor'any, dia nomen’Andriamanitra azy ny “fanjakana sy ny fahendrena”, ny “siansa” ary ny “teny fanapahan-kevitra”, ka nanome azy fahalehibiazana roa sosona, mpanjaka sy faminaniana. David, izay mbola nalaza noho ny fahatsapany ny rariny, dia ao amin'ny taranaky ny mpaminanin'ny silamo izay mitory ny mônôteisma hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, Mohamady. Ankoatra izany, ny Kor'any dia mitatitra fa Andriamanitra dia nampianatra an'i Davida ny tsiambaratelon'ny fanaovana akanjo fiarovan-tratra mba hiarovan' ny olona tenany amin'ny herisetra ataony. Hadita maromaro no manao an'i Davida ho lehilahy be herim-po amin'ny fotoanan'ny ady (ohatra ny ady tamin' i Gôliata) sy firesahana momba ny fomba fivavahany mandritra ny ampahatelon'ny alina sy ny fifadian-kanina isaky ny roa andro. Ny lovan-tsofina silamo dia manao ho maty teo am-piankohofana.
Misaona ny fahafatesan' i Absalôma i Davida, sary nataon' i Gustave Doré, 1866.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Davida_(mpanjaka)&oldid=1044139"
Dernière modification le 22 Febroary 2022, à 16:45
Voaova farany tamin'ny 22 Febroary 2022 amin'ny 16:45 ity pejy ity.